Firy ny watt vokarin'ny mpitaingina Tour de France? - Tour De France
Tena > Tour De France > Tour de france watts - ahoana no hamahana
Tour de france watts - ahoana no hamahana
Firy ny watt vokarin'ny mpitaingina Tour de France?
Raha salanisabisikileta afakamamokatra 100watts, probisikileta afaka400 eo ho eowattsmandritra ny ora farany aTour de Francesehatra. Hamafin'ny fampiofananadiany fiovana henjana indrindra azo refesina.
wegmans hanina salama
fuse comp manokana
Inona no wattage tsara ho an'ny bisikileta?
Ny ankamaroan'ny prompitaingina bisikiletymamokatra 200 ka hatramin'ny 300 eo ho eowattsamin'ny salan'isa mandritra ny fizahan-tany adiny efatra. Ilay mpitaingin-tsoavaly kosa dia mety haharitra ihanywattagemandritra ny kilasy fihodinana 45 minitra na adiny iray.28. 2015.
Matetika inoana fa ny fampisehoana bisikileta dia fampitoviana tena tsotra. Momba ny tanjaka sy lanja daholo izany. Ampiofano fotsiny ny FTP anao, atsaharo ny tsakitsaky, mandehana haingana, mora.
Eny, raha ny marina tsia, somary manahirana kokoa noho ny fitadiavana hery amin'ny lanjan-javatra tsy misy dikany. Eny, mazava ho azy fa tsy fako tanteraka, nohamafisina fotsiny. (mozika upbeat) Fantatsika rehetra ireo mpitaingina bisikileta izay mety tsy mahia.
Na azonao atao koa ny miantso azy ireo malala-tanana izay mbola matanjaka be amin'ny bisikileta. Tena mahasosotra izany izao satria manana salady ho an'ny sakafo hariva ianao, sakafom-pisakafoanana amin'ny seleria ary kafe kely mainty. Ahoana no anaovany an'izany? Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny lanjany dia vato misakana ihany ho anao amin'ny bisikileta rehefa mandeha miakatra na mihazakazaka ianao.
Ka raha mihazakazaka milanja eo amin'ny fisaka ianao dia tsy maninona na milanja be aza ianao. Ny zava-dehibe dia ny herinao tanteraka. Na dia manomboka miakatra ambony aza ny arabe ary manohitra azy ny lanjanao dia tadidio fa tsy ny hery misintona ihany no h.
Mbola mila mandresy ny fanoherana mihazakazaka sy ny drag aerodynamic ianao. Ka raha miakatra dimy isan-jato ianao ary mihodina amin'ny 20-30km isan'ora, miditra lalina, mahazo aerodynamika ary mipetrapetraka amin'ny familiana dia tena hanampy tokoa. Mazava ho azy, fa haingana kokoa ianao no mandeha, ny fitarihana aerodynamika manan-danja kokoa no zava-dehibe kokoa.
Ka amin'ny fiakarana mihantona dia hihazona anao kokoa ny lanjanao. Arakaraka ny fiakaran'ny haavon'ny fiakarana no manisa isa ny fampisehoana. Noho izany ao Angeroo aho dia tena naniry ny hanana fifehezana kely kokoa amin'ny fihinanana sôkôla. (mozika malefaka) Ny zavatra miakatra matetika dia midina koa.
Midina eny ambany, ny hery misintona dia eo anilanao. Arakaraky ny habetsaky ny lanja anananao no hanampiana anao rehefa haingana dia haingana ianao ka tsy mila mandeha an-tongotra. Ka tsy maninona ny hery ary tsy misy dikany ny lanjany.
Ny mpitaingina mavesatra dia manana tombony lehibe amin'ny fidinana haingana. (mozika malefaka) Zavatra iray hafa tokony hotadidina rehefa mihena ny fandefasana olona amin'ny bisikileta na rehefa tonga eo am-piandrasana ny fandatsahana ped ianao, tena mahalana ny momba ny FTP to- Weight ratio raha tsy hoe mitondra fitomboana maharitra sy maharitra ianao. Ny zava-dehibe dia ny fomba ahafahanao manafika na manafina ny fanafihana, ary ireo dia hery fohy faran'izay fohy.
Azonao atao ny manana fampitahana FTP-mavesatra mahavariana ary mety mbola tsy afaka mamorona hery fohy ianao. Indraindray ny lanjan'ny tanjaky ny lanjanao mihoatra ny 15 segondra na iray minitra dia zava-dehibe kokoa aminao noho ny amin'ny fiakarana lava ny lanjanao, ny bisikiletanao sy ny fiarovan-doha ary ny kiraronao ary ny fitafianao, izay mifanohitra aminao. Ka raha mpitaingina kely sy maivana kokoa ianao miaraka amin'ny FTP tsara kokoa, io lanjany io dia hamorona ampahany betsaka amin'ny lanjany manontolo.
Azonao atao tokoa ny milaza fa ny mpamily maivana miaraka amin'ny FTP tsara kokoa dia voasazy. Toa izany ny elatry ny mpamily kely voatery nihazakazaka tamin'ny sisin-tsisiny manana lanja kely 6,8 kg, avy eo marina ny anao, mihetsiketsika aho ary faly be fa manana andro iray izao ka tsy mila. miahiahy bebe kokoa momba io lanja io. (Hira fifaliana) Farany dia tonga amin'ilay heveriko ho zava-dehibe indrindra amin'ny fampisehoana bisikileta, ara-batana.
Ireo bisikileta tsara indrindra dia tsy ireo manana fifandanjana mavesatra amin'ny lanjany fotsiny. Izy ireo no afaka manery ny booth mafy anao, izay tena sarotra tokoa ny refesina amin'ny laboratoara, ary manome anao isa. Amin'ny ankapobeny, raha mijaly kokoa ianao ary afaka mihazona ity bisikileta ity, dia afaka manao zavatra tsara kokoa noho ny olona iray manana tahan'ny hery sy lanjany tsara kokoa noho ianao ianao.
Ka any ianao no mandeha ny tahan'ny hery mavesatra dia tsy be tantely na theendue loatra na dia tena manandanja aza izy io. Ampahafantaro anay amin'ny fanehoan-kevitra raha fantatrao ny tanjaky ny tanjaky ny lanjanao. Azonao atao ny manindry etsy ambany raha hisoratra anarana amin'ny atiny tsara kokoa, ary raha te hahita lahatsoratra GCN vitsivitsy momba ny fanatsarana ny tanjakao ianao na dia mety tsy manana ny lanjanao aza dia tsindrio eto.
400 watt ve dia bisikileta mahery be?
Jiro irayhazakazaka am-bisikiletaiza no afaka mamono avoavowattageisa no handeha abetsakaHaingankaingana. Nilaza ilay lahatsoratra fa fitambarana mahazatrahazakazaka am-bisikiletamety afaka mamoaka 250 ka hatramin'ny 300wattsho salan'isa mandritra ny 20 minitra FTP (fantsom-baravarana miasa) raha ny salanisa matetika mazàna400 watt.
Haingam-pandeha ahoana no mitaingina azy ireo ao amin'ny Tour de France?
Nandritra izay taona maro lasa izay, ny mpandresy nyfitetezam-paritranandefa ny hafainganam-pandehan'ny salan'isa mahitsy manodidina ny 25mph (40kmph) fa feno ny iray manontolofitetezam-paritra. Mitsangàna, midina, andrana amin'ny fotoana, lemaka, eo amin'ny 25mph no misy salan'isa rehetra.16. 2015.
Efa nipetraka tao an-trano ve ianao ary nijery ny Tour de France ary ahoana no fomba nifohazan'ireo mpitaingina haingana ireo? - Tena manana aho. Soa ihany fa manana traikefa kely hizara aminareo koa izahay. - Ooh, eny ataontsika izany. (mozika elektronika milamina) - Raha te hiakatra toa ny osy an-tendrombohitra ao amin'ny Tour de France ianao dia mila miaina isan-tsegondra isan'andro isan'andro ary mifantoka kely ao an-dohanao.
Mitsangàna, haingana.- Eny, tokony hampamoahina ianao isaky ny misy anao, tsy afaka mipetrapetraka ianao ary mifikitra amina sôkôla goavambe amin'ny volana Febroary toy ny tiantsika rehetra atao, ary avy eo te-hiakatra haingana any amin'ny volana Jolay. . Heveriko fa sprinter amin'ny lafiny sasany, olona kely kokoa? Raha mifantoka amin'ny fiakarana haingana ianao dia afaka miala amin'izany fihetsika izany.
Fa raha te handeha haingana any Tour de France ianao amin'ny volana jolay dia tokony ho tompon'andraikitra amin'ny manaikitra rehetra izay aloaky ny vavanao ianao. Ary toy izany koa ny hetsika rehetra ataonao. Ny fihetsika rehetra dia misy fiantraikany eo amin'ny vatan'olombelona.
Ohatra, alao sary an-tsaina hoe mipetraka amin'ny rihana fahatelo amin'ny sakana misy trano ianao ary mitondra fiara miakatra sy midina farafahakeliny indroa isan'andro. Dingana 28.800 izany alohan'ny nataonao akory ny Tour de France. Ka ho tsara kokoa ve ny mitondra ascenseur aorian'ny fiofanana mafy mandritra ny adiny fito? matihanina Tour de France.
Raha niresaka sakafo aho, indray mandeha dia nanana mpiara-miasa amiko izay tsy nihinana afa-tsy voanemba sy rano nandritra ny tapa-bolana talohan'ny hazakaza-kavoana lehibe. Tsy mahasalama tokoa ny manana sakafo voafetra toy izany, saingy nahavita izany haingana izy. - Oats sy rano? - Ie, saro-kenatra. - Mampivarahontsana ny feo.
Raha miakatra ny Col Madeleine izaho sy i Chris dia miakatra izany. Ka mety fotoana mety hilazana aminao kely momba ny fiofanana momba ny haavony. Ny fiofanana momba ny haavon'ny toerana ambony dia nitombo tamin'ny lazany tato anatin'ny taona vitsivitsy, Tour Proshave dia nanandrana karazana lasy avo lenta, na fiofanana momba ny haavon'ny toerana avo, tamin'ny fotoana iray nandritra ny asany. - Ankehitriny ny torimaso dia ny hatory ambony ary ambany ny fanazaran-tena.
Raha ny tena izy, rehefa matory amin'ny toerana avo isika, rehefa miaina ny rivotra tsy misy oxygen, ny vatantsika dia terena hifanaraka amin'ny famokarana sela mena bebe kokoa izay mitondra ny oxygen any amin'ny hozantsika, izay fototry ny fampisehoana aerôbika. Ary eny, afaka manao fanitsiana mitovy amin'ny fampiononana ao an-tranonao ianao amin'ny fampiasana efitrano hyperbaric na tranolay avo lenta, misy fanamafisana bebe kokoa amin'ny fandehanana any amin'ireo toerana lavitra ireo. Izany dia satria mazàna tsy dia variana loatra ny atleta, izay midika fa afaka mifantoka amin'ilay asa atrehiny izy ireo.
Sarotra amin'ny haavony izy, sa tsy izany? - Haingam-pandeha izany.- Tsy ho an'ny rehetra ny fiofanana amin'ny haavo ary azo antoka fa afaka maka fotoana kely vao zatra, fa ny mpitaingin-tsoavaly dia voatonona nilaza fa ny fitomboan'ny tanjaka maharitra hatramin'ny 10%. Izay matetika mety maharitra roa taona na mahery vao vita.
Na izany aza, mpamaly ambony ireo, ary tsy toy ny tombony ara-batana mahazatra, tsy maharitra mandrakizay ireo. 10 ka hatramin'ny 20 andro fotsiny izay midika hoe haavon'ny dia hafa iray no ilaina - Na manao ahoana na manao ahoana ny fahaizanao Amin'ny maha-bisikileta amateur anao dia tsy azo tanterahina fotsiny ny fiakarana haingana toy ny Tour de France pro noho ny antony tsotra iray. Hanomboka lohany ianao - eny, ny aerodynamika dia manampy amin'ny fiakarana amin'ny hafainganam-pandeha maharitra 20 kilometatra isan'ora.
Tsy vitan'ny hoe manampy amin'ny hafainganana izy, fa manampy amin'ny fampitomboana ny hafainganana amin'ny fiakarana. Rehefa lasa ny mpitaingina rehetra, dia mihazakazaka haingana ny hafainganana ary ny mitaingina anao any aoriana dia afaka mijanona ao anaty kodiarana raha mbola azo atao. Okay, mihobia ry sakaiza! - Mety hanontany tena ianao izao fa izay mipetraka amin'ny bisikileta dia mahazo tombony amin'izany.
Izany dia nilaza fa raha miala eo an-jorony ny mpitaingina laharana faha-10, na hihazakazaka hisambotra kodiarana izy ireo na hikoropaka ny fingotra ary hamela ny kodiarana mandritra ny androm-piainana, hihinana tsara ary hikarakara ny paikadinao sy ny toeranao rehetra, tonga lafatra fotsiny amin'ny hazakazaka. Saingy mbola misy zavatra manakana anao - ary izany no génétique misy anao! Ny mpamily sasany dia fanakorontanana fotsiny. Afaka manodina oksizenina bebe kokoa ary miaraka amin'izay dia miteraka herinaratra mamokatra bebe kokoa ary mandritra izany fotoana izany dia mahomby kokoa noho ny sisa isika - ary ireo bandy ireo no fonosana feno.
Tamin'izany fotoana izany dia nahagaga tokoa ny hafainganam-pandehan'izy ireo nitaingina bisikileta izay tsy maintsy nitaingenany - ny antony nahatonga izany dia ny fanaovana dopage fotsiny. Heveriko fa raha te hiakatra toa ny Tour de France pro ianao 20 taona lasa izay, dia mila mahazo «booux de stimulants» sy «stimulants» avy any Chopson-nao ianao, ary zavatra tsy mazava izany. Ary ny fandinihana dia naneho fa tsy afaka mamadika ampondra ho racehorse ianao.
Misy antony ve tianao itiavanao an'io havoana Mitsangana io? - Ataovy lava kokoa aho (misento i James)
Tsara ve ny 3,5 watt isaky ny kilao?
Ohatra, mpitaingina 80kg miaraka amina famokarana herinaratra maharitra maharitra 280wattsmanana tahan'ny hery-mavesatra amin'ny3,5 watt iray kilao(fanafohezana matetika hoe3.5IN /kgna3.5W. Zava-dehibe ny tahan'ny hery lanja satria aLEHIBEmpilaza mialoha ny zava-bita.
Firy watt no 25 mph?
Amin'ny 12.5mph, hiteraka 75 eo ho eo ianaowattsamin'ny salanisa. Ampiasao ireo salanisa ireo: 95wattsmandritra ny 14mph, 120wattsho an'ny 15.6mph, 148wattsho an'ny 17.2mph, 180wattsho an'ny 18.7mph, 218wattsho an'ny 20.3mph, 262wattsho an'ny 21.9mph, 311wattsho an'ny 23.4mphsy 366wattsHO AN'NY25 mph.
Tsara ve ny watt 400 amin'ny bisikileta?
Araka ny hitanao, nytsara indrindraezaka ataon'ny olombelona amin'ny famokarana herinaratra mandritra ny adiny iray amin'ny abisikiletadia manodidina ny 300-400 Watts.07/19/2009
Tsara ve ny 4 watt isaky ny kilao?
Ka ny bisikileta klioban'ny sehatra maro no manana tanjona ny hahatratra hery miasa (FTP) 4W / 4W /kg. Na izany aza, 4W /kgMbola tsara kokoa noho ny ankamaroan'ny bisikileta amin'ny klioban'ny klioba, ary mamelatra ara-bakiteny ny rehetra eo amin'ny sezalà. Ka izany aLEHIBEtanjona kendrena.04/15/2020
Firy Watts no vokarin'ny mpitaingina Tour de France?
Ireo tarehimarika ireo dia midika fa namokatra mihoatra ny 4 watt isaky ny kilao nandritra ny dingana manontolo izy. Ary izany dia tsara fotsiny mba hahazoany ny toerana faha-63! Tamin'ny fanombohan'ny Col de la Core, Navarro dia namokatra salan'isa 371 watt mihoatra ny 4mins (sary etsy ambany, hery ny tsipika maitso, nefa, hatoky anay indray izahay amin'ireo tarehimarika).
Firy ny watt ananan'i Peter Sagan ao amin'ny Tour de France?
Mpitaingina toa an'i Peter Sagan an'i Bora – Hansgrohe dia mety nahatratra 1 500 watt tamin'ny faran'ny hazakazaka an-tsaha. Matetika ny Tour de France dia misy fizarana vatokely farafahakeliny farafaharatsiny, fantatra amin'ny anarana hoe pavé (na dia amin'ity taona ity aza, natakalo vatokely izany).
Firy ny Watts ilain'ny fiakarana Col du Tourmalet?
Maharitra hafiriana ny fiakarana ny Col du Tourmalet. Ny mpihanika lalana iray dia mety ho eo anelanelan'ny 350 ka hatramin'ny 375 watt amin'ity fiakarana farany amin'ny Stage 14. Ny mpitaingina tsotra iray dia mety hanakaiky ny 175 ka hatramin'ny 200-izay midika hoe ny mpihanika faratampon'ny Tour dia afaka miakatra ny Col efa ho indroa mandritra ny dianao mankany an-tampony.